Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UXiaowen Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan
Ngaphambilini, ngenkathi ngivame ukuzwa abantu bephawula kokuthile, babevame ukuthi “ukubona ukukholwa.” Ngokuhamba kwesikhathi, nami ngakuthatha lokhu njengesisekelo sokubuka izinto, futhi kwaba ngokufanayo nangamazwi kaNkulunkulu. Umphumela kwaba ukuthi ngagcina ngingasakwazi ukukholwa amazwi amaningi kaNkulunkulu ayengagcwalisekanga. Ngenkathi isikhathi sami engangisichithe ngikholwa kuNkulunkulu sikhula, ngabona amazwi kaNkulunkulu emazingeni ahlukahlukene okugcwaliseka, ngabona amaqiniso nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu futhi angabe ngisathandabuza lutho olushiwo nguNkulunkulu. Ngacabanga ukuthi lokhu kwakuwukuba kwami nokuqonda ukuthembeka kukaNkulunkulu, nokuthi ngangikwazi ukukholwa ukuthi konke uNkulunkulu ayekushilo kwakuyiqiniso.
Kodwa ngelinye ilanga, lapho ngifunda la mazwi ayekhulunywe nguNkulunkulu, “ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu osenyameni ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ngabe kade abhubhisa sonke isintu esihogweni,” ngaphinda futhi ngangakwazi ukukukholwa lokhu. Ngacabanga, ukube bekuthe “ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu osenyameni ezinsukwini zokugcina, kusho ukuthi sonke isintu esonakele kufanele ekugcineni sibhujiswe,” ngabe sengikwazi ukukukholwa ngokuphelele, njengoba ngangazi ukuthi uNkulunkulu osenyameni ubaluleke kangakanani kithina. Kodwa ukuthi ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu osenyameni ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu wayeyobe esebhubhise kudala umuntu esihogweni, ngacabanga ukuthi lokhu kwakuyincazelo nje. Lapho ngicabanga ngalokhu, ngazizwa ngingakhululekile. Kwakufanele ngize phambi kukaNkulunkulu ngifune usizo nokuholwa: O Nkulunkulu! Angifuni ukubuka amazwi akho ngale ndlela futhi ngiyakuzonda ukuthi nginamacebo nginobuqili kanje. Sengikulandele isikhathi eside kanje futhi sengibone amaqiniso amaningi okugcwaliseka kwamazwi Akho, pho ngingacabanga kanjani ngale ndlela? O Nkulunkulu! Ngifisa ukukholwa izwi ngalinye olishoyo futhi ngibe nokukholwa kwangempela emazwini Akho. Ngifisa ukuba ungiholele kuleli qiniso!
Kamuva, ngafunda lokhu kuhlanganyela okuvela kokungenhla okuthi: “Umuntu kufanele abone ukuthi lonke izwi elishiwo nguNkulunkulu liyogcwaliseka futhi lifezwe, kodwa umuntu ngeke awazi noma awabone wonke. Ngenxa yokuthi ukugcwaliseka kwamazwi kaNkulunkulu ngeke nakanjani kufane ngokuphelele nalokho umuntu akucabangayo futhi kwesinye isikhathi kuzofihlwa yizinto eziningi eziseceleni, futhi umuntu ngeke akwazi ukuhlaluka kuzona; uNkulunkulu kuphela owazi ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayogcwaliseka kanjani. Kunezinto ezithile lapho ukugcwaliseka kwamazwi kaNkulunkulu kungabonakala kuzona ngokucace bha kumuntu, kanye nakwezinye lapho kungelula ukubona ngokucacile, ngakho isintu kufanele singasekeli isiphetho esisicabangayo mayelana nokuthi amazwi kaNkulunkulu agcwalisekile na ekucabangeni kwaso. Ngisho nalabo ngokuqhathaniswa abanokuqonda okungcono iqiniso abakwazi ukubona kahle ngokuphelele ukuthi izwi ngalinye likaNkulunkulu ligcwaliseka kanjani. Izinto umuntu abona kahle kuzona ukugcwaliseka kwamazwi kaNkulunkulu zikhawulekile kakhulu ngoba umuntu akakwazi ukubona ngokuphelele ubuhlakani bukaNkulunkulu. Ukuthi noma yimaphi amazwi kaNkulunkulu agcwaliseka kanjani kuncike ngokuphelele Kuye futhi konke kuqukethe ubuhlakani bukaNkulunkulu—pho umuntu angakuqonda kanjani?” (“Inguquko Eyisisekelo Emibonweni Iwuphawu Lokuqonda Ngokwempela Iqiniso” kwethi Imilando Yokuhlanganyela Nezinhlelo Zokusebenza (I)). Ngifunda leyo ndima, ngashesha ngacabanga ngoJona. Ububi babantu baseNiniva bafinyelela kuJehova, ngakho uNkulunkulu wathumela uJona eNiniva ukuba ayomemezela athi “Ezinsukwini ezingamashumi amane, liyakuchithwa iNineve.” (UJona 3:4) Kodwa uJona wayengazimisele ukwenza njengokusho kukaJehova ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu unomusa nesihawu, unothando oluningi futhi akasheshi ukuthukuthela. UJona wayesaba ukuthi, uma ehamba eyomemezela njengokusho kukaJehova, bese emva kwezinsuku ezingama-40 uNkulunkulu angalethi ukuhlupheka kubantu baseNiniva, babeyothi ungumqambimanga nomkhohlisi. Eminyakeni eyinkulungwane kamuva, ngangibhekene nalesi simo sonke esibonakala sibhalwe eBhayibhelini. Ngangazi ngokucacile ukuthi, ngaleso sikhathi, uNkulunkulu ngempela wayefuna ukubhubhisa iNiniva, kodwa ngenxa yokuphenduka kwabo akakwenzanga lokho. Kodwa ukube ngangiwumuntu ophila esikhathini sikaJona, owayengazi ukuthi uJona wayekade ebhekane nasiphi isimo futhi ngibone nje kuphela ukuthi konke kwakuhamba kahle eNiniva, ngabe ngangiyocabanga-ke ukuthi uJona wayengumqambimanga nomkhohlisi? Impela ngangiyocabanga kanjalo.
Kulapho kuphela lapho ngaqonda khona ukuthi ukwahlulela izinto ngokubuka amaqiniso abonakala ngaphandle kunokuchema kakhulu, kulula kakhulu. Akubuki amaqiniso onke, akukhona ukubuka izinto ngendlela ezimi ngayo futhi akunembi neze. Lokhu kungenxa yokuthi izinto ezibonakalayo emehlweni omuntu zimbalwa kakhulu, zikhawulekile futhi ezikha phezulu nje. Ukubona izinto ngokukaNkulunkulu kuphela okunembile, okuphelele, futhi okuveza isimo seqiniso. Njengalapho uJehova ayefuna ukubhubhisa iNiniva. Uma kubukwa amaqiniso abantu ababekwazi ukuwabona, esikhathini esingaphambili kokuba uJona akhulume lawo mazwi kuze kube kamuva, konke kwakukuhle kuleliya dolobha, kungekho phawu lokuthi uJehova wayehlose ukulibhubhisa. Isimo sangempela, kodwa-ke, kwakuwukuba, esimweni sikaNkulunkulu sokulunga, abantu baleliya dolobha babonakele kakhulu kangangokuba kwakufanele uNkulunkulu alibhubhise. Kodwa uNkulunkulu wakhombisa umusa kubantu futhi wabathanda, ngakho wathumela uJona ukuba abatshele baphenduke. Emva kwalokho, uNkulunkulu wabona ukuthi babephenduke ngempela ngakho-ke, ngenhliziyo enomusa, akazange alethe izinhlupheko ukuba zibabhubhise. Ukube babengaphendukanga, uNkulunkulu wayeyokufeza lokho ayekade ekushilo: “Ezinsukwini ezingamashumi amane, liyakuchithwa iNineve.” Isimo sangempela ngaleso sikhathi saqhubeka ngale ndlela, kodwa kwakungenzeke ukuba abantu abathintekayo basibone noma basazi sonke. Ngamanye amazwi, konke uNkulunkulu akushoyo kuyogcwaliseka kufezekiswe—lokhu kuyiqiniso. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu akasoze akwazi ukuqonda ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, kanye nokuthi noma yiliphi izwi likaNkulunkulu ligcwaliseka kanjani konke kusesandleni sikaNkulunkulu ukuba akunqume futhi konke kuqukethe ubuhlakani bukaNkulunkulu, umuntu kuphela ongakwazi ukukuqonda, ingasaphathwa eyokuba angene kukhona ngokuphelele.
Nginikeza ukubonga kuNkulunkulu ngokusebenzisa lolu daba ukuba angikhanyisele, angenze ngiqonde ukuthi amagama athi “ukubona kufana nokukholwa” abantu abahlezi bewasho akashayi emhloleni, kanye nokuthi ukulinganisela amazwi kaNkulunkulu ngokwalo mbono kuyiphutha ngokuphelele. Emva kokuba ngithole ukukuqonda lokhu, ngabe sengifunda futhi la mazwi akhulunywa nguNkulunkulu, “ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu osenyameni ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ngabe kade abhubhisa sonke isintu esihogweni ,” ngabe sengikwazi ukuwakholwa kusuka enhliziyweni yami futhi ngiwamukele ngendlela efanele. Njengoba sazi ukonakala kwethu kanye nokulunga kukaNkulunkulu, kufanele ngabe sabhujiswa kudala, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu usikhombise umusa waphinde wafika futhi siqu Sakhe esenyameni ukuze asisindise, singaphila ebukhoneni bukaNkulunkulu namuhla. Yimanje kuphela lapho senginokuqonda okugqamile ukuthi izwi ngalinye likaNkulunkulu lifanelwe ukukholwa, futhi enhliziyweni yami ngiyakuzwa ukuthi uNkulunkulu ulungile kakhulu futhi unothando olukhulu kumuntu.
Nginikeza ukubonga kuNkulunkulu ngokukhanyisela Kwakhe okungenze ngaqonda le ngxenye yeqiniso, futhi lokho kuguqule indlela yangaphambilini nengelona iqiniso engangibuka ngayo izinto. Kusukela manje kuya phambili, noma ngabe yindlela engibuka ngayo abantu noma izinto, ngaso sonke isikhathi ngiyokwenza njengokwamazwi kaNkulunkulu, ngoba amazwi kaNkulunkulu ahlaba esikhonkosini. Ngaphandle kwamazwi kaNkulunkulu, noma yimuphi umbono ofana nokuthi “ukubona kufana nokukholwa” abantu abawubona njengoyiqiniso, kungakhathalekile ukuthi usuke wasetshenziswa futhi wahlolwa noma unomlando omude, usengamazwi nje angashayi khona. Amazwi kaNkulunkulu yiyona ndlela kuphela engikala ngayo ngilinganisele isisindo sezinto.
Okwedlule：Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
Okulandelayo：Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
Akulula Ukuzazi Ngeqiniso Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi